Clicktale: သွင်ပြင်လက္ခဏာကင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် Analytics Event Tracking | Martech Zone
ပုံပြင်ကိုနှိပ်ပါ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအားသူတို့၏ဆိုဒ်များနှင့်ပြissuesနာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောပုံရိပ်ဖော်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးသည့်သရုပ်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွင်ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ClickTale ၏အသစ် Visual တည်းဖြတ်သူ သင်၏ site အတွင်းဖြစ်ရပ်များကိုပေါင်းစပ်ရန်ကုဒ် - အခမဲ့နည်းလမ်းဖြင့်နောက်ထပ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်၏ event element ကိုသာညွှန်ပြပြီးဖြစ်ရပ်ကိုသတ်မှတ်ပါ။
နှင့် Visual တည်းဖြတ်သူClicktale သည်ဖြန့်ချိမှုအတွင်းအဖြေရှာရန်ပထမဆုံးသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် Adobe Launch လုပ်ပါနောက်မျိုးဆက် Adobe Cloud ပလက်ဖောင်းတွင် Adobe's tag manager ဖြစ်သည်။ Adobe မှစတင်သောအခါအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် tags များကိုစုစည်းရန်နှင့်စီမံရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်၊ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့် website ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်။
ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် Visual တည်းဖြတ်သူ Adobe မှ Launch သို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်သမားများသည်အကျွမ်းတဝင်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော interface တစ်ခုမှတစ်ဆင့်အဆင့်မြင့်မြေပုံများကိုရရှိနိုင်သည်။ Adobe မှ Launch အား Clicktale အဖြစ်အပျက်များပြုလုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုရန်အတွက် Clicktale သုံးစွဲသူများသည်လွယ်ကူသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ရုံမကအခြား Clicktale အချက်အလက်များ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိရန်လည်းအကျိုးရှိသည်။
Clicktale ၏ထူးခြားသောနည်းပညာသည်ဖောက်သည်များ၏ခရီးစဉ်ကိုမြင်ယောင်စေသည်။ စျေးကွက်သမားများသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ကူညီသည်။ Clicktale ကဲ့သို့သောသော့ချက်ကျသောနည်းပညာပံ့ပိုးသူများနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ယနေ့အထိအထိရောက်ဆုံး toolset ထံမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေနိုင်သည်။ Jon Viray, ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာ၊ Adobe
Clicktale နှင့် Adobe ၏ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ Adobe မှ Launch သည်ဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား Launch အတွင်းရှိ Launch အတွင်းရှိဒေတာအလွှာအတွင်းမှ Clicktale ၏ထူးခြားသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရယူခွင့်ပြုသည့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုလည်းပါဝင်သည်။ ဤသည်သည် Clicktale အချက်အလက်များနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အတူစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်, ဖောက်သည်များ၏စကားသံသို့မဟုတ်ဘရောက်ဇာကိုဒေတာစုဆောင်းခြင်းကနေအကျိုးခံစားရသည့်အခြားစနစ်များကဲ့သို့သောဖြည့်စွက် applications များ, တိုးမြှင့်ဖို့အဆင်ပြေပြီးအစွမ်းထက်ယန္တရားသည်။
ClickTale's Solutions Include
လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်း - In-page လမ်းကြောင်းများ၊ အမူအကျင့်ပုံစံများနှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုမောင်းနှင်သည့်အရေးပါသောလမ်းဆုံများ။
နေပြည်တော် - Mouse လှုပ်ရှားမှု၊ မောက်စ်ကလစ်နှိပ်ခြင်း၊ scroll-reach၊
Session Replays - Desktop (သို့) မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့်သင်၏ site ပေါ်တွင်သူတို့မြင်တွေ့နေသည့်အရာနှင့်အတိအကျကိုမြင်နိုင်ရန်သင်၏သုံးစွဲသူများ၏ browsing session များပြန်လည်စစ်ဆေးမှုကိုကြည့်ပါ။
ကူးပြောင်းခြင်း Analytics မှ - ဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေပါ။
App ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - ဇာတိနှင့်မျိုးစပ်ပေါင်းစပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများအပေါ်အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များနှင့်အပြုအမူများကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည်
Analytics မှပေါင်းစည်းမှု - Adobe, Webtrends နှင့် Google Analytics နှင့်အတူ။
စမ်းသပ်ခြင်းပေါင်းစည်းမှု - Adobe Target, Qubit, Optimizely, Kaizen, Monetate, Oracle Maxymiser, Optimost, SiteSpect နှင့် Google Optimize တို့နှင့်အတူ။
အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းစည်းမှု - Adobe Experience Manager နှင့် Sitecore နှင့်အတူ။
တုံ့ပြန်ချက်ပေါင်းစည်းမှု - OpinionLab၊ Medallia ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ iPerceptions၊ Qaultrics, Usabilla နှင့် Liveperson တို့နှင့်အတူ
Tag ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းစည်းမှု - Adobe Markeitng Cloud, Ensighten၊ IBM၊ Tealium, Signal နှင့် Google Tag Manager တို့နှင့်အတူ။
E-commerce ပေါင်းစည်းမှု - Magento, XCart, Zencart နှင့် Yahoo! အသေးစားစီးပွားရေး။
Tags: AdobeAdobe analyticsAdobe အတွေ့အကြုံရှိသောမန်နေဂျာAdobe Markeitng တိမ်တိုက်Adobe ပစ်မှတ်analytics ဖြစ်ရပ်ခြေရာခံခြင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်ရပ်များအာရုံစူးစိုက်မှု heatmapထအဖြစ်အပျက်ခြေရာခံခြင်းanalytics googleGoogle က Optimizegoogle tag မန်နေဂျာနေမင်းIBM ကကွမ်းခြံကုန်းKaizenlink ကိုအပူမြေပုံLivePersonmagentoMedallia ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံရှာခြင်းmouse ကိုလှုပ်ရှားမှု heatmapပုသိမ်OptimizerOptimostOracle က MaxymiserQaultricsqubitscroll ရောက်ရှိပါsignal ကိုသီရိဆိုက်ကိုTealiumUsabilla။XCartYahoo! အသေးစားစီးပွားရေးZencart